Xiddiga ugu sareeya 10 testosterone: taas oo kugu habboon? | AASraw
Xiddiga ugu sareeya 10 testosterone: taas oo kugu habboon?
/blog/Gallery/Xiddiga ugu sareeya 10 testosterone: taas oo kugu habboon?
Posted on 12 / 18 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Qiimaynta tijaabada ah waxaa lagu qeexi karaa maaddooyinka testosterone ee dhabta ah ee ku jira silsiladaha ku xiran. Silsiladaha Kontoroolka waxay xakameynayaan isku dheelitirka qaybta, iyadoo si fudud loo eegayo xalka dawada ee dhiiggaaga. Xakameynta daroogada ee biyaha ayaa lagu go'aamiyaa qiyaasta silsiladda kaarboon ee ester ku jira. Silsiladda kaarboonka dheer waxay u tarjumeysaa qoob-ka-dhiska dheeraadka ah iyo dhererka dhererka, yaraanta daawada biyaha. Tusaale ahaan, proposterate testosterone waa ester laga sameeyey saddex silsiladood oo kaarboon ccc. Caadi ahaan, tani waxay ka dhigan tahay in ay jiraan saddex silsiladood oo kaarboon oo ku jira tan ester testosterone.
WKoofiyadu waa astaamaha testosterones?
Mawduucda tijaabada ah ee testosterone waxay ku jahawareey dad badan, oo aad dhif u heli kartaa qeexitaan cad marka laga reebo sharaxaadda faahfaahsan ee ay bixiyaan culimada badan. Ereyada fudud, waxaad u baahan tahay marka hore inaad fahamto waxa aasaasuhu yahay kahor intaanad u guurin si ay isugu geeyaan hormoonka galmada. Ester waa fal-celin kiimikaad oo ka samaysan hal, laba ama saddex silsiladood. Cabbirka sayniska ayaa dhab ahaantii ka dhalatay tirada silsiladaha gaaska la heli karo. Hadda waxaad u adeegsan kartaa aragti isku mid ah si aad u fahamtid qiimeeyaashii testosterone. Sida kor lagu sharraxay, qiimeeyeyaasha yaryar waxay ka yaryihiin silsiladaha kaarboonka yar yar ee biyaha iyo dhiigga sidoo kale.
Jirkaaga wuxuu soo saarikaraa testosterone dabiici ah kaas oo inta badan mas'uul ka ah galmada iyo dhismaha muruqyada. Dadka qaba yaraanta testosterone ee sababo caafimaad daraadeed kala duwan, waxay aadi karaan daaweynta testosterone. Halkan dhakhtarku wuxuu kuu qori karaa daawooyin badan oo loo yaqaan 'testosterone ester drug' oo ka dib markaad qaadato dhiiggaaga isla markaana ku siin doono natiijooyin isku mid ah kuwa dabiiciga ah. Marka aad da 'jirtid, heerarka wax soo saarka testosterone hoos u dhac. Heerarka hoormoonka badanaa way sarreeyaan inta lagu guda jiro qaangaarka hore iyo qaangaarka.
Sidee loo sameyaa tijaabin tijaabis ah tijaabinta maqaarka laga soo saaray budooyinka lafaha ah ee lafaha
Marka da'da 35 sano iyo ka sarreysa heerarka hoormoonka qalliinka ee jirku uu bilaabmayo hoos u dhaca, inkastoo cudurada sida hypogonadism ay keeni karaan. Saameynaha tijaabada ah ee testosterone ayaa sidoo kale u kala duwan hal nooc ilaa mid kale, laakiin inta badan waxay wadaagaan saameynta isku mid ah. Tusaale ahaan, bararka meesha laga duray ayaa ah mid caadi ah marka la isticmaalo daawooyinka laysku duro iyadoo saameyno kale ay ka mid yihiin madax xanuun, hurdo la'aan iyo mararka qaarkood sii dheeraato.
Maxaan ugu baahanahay testosterone?
Testosterone caadi ahaan loo yaqaan hormoon lab ah. Dad badan oo aan ogeyn waa in ragga iyo haweenka labadaba hormariyaan hormoonka. Testosterone waa hoormoon oo hormoon ah oo soo saarta astaamaha ragga. Waxaa lagu soo saaray hal meel oo jirkaada ka mid ah kadibna u socdo qaybo kale oo jirka ah iyada oo loo marayo dhiigga. Hormarka waxaa lagu soo saaray meelahan soo socda;
Haweenka ay soo saaraan ugxan-sidaha
Qanjirrada adrenal ee ku yaal kore kelyahaaga ayaa laga helaa ragga iyo dumarka labadaba.
Heerarka testosterone waxay ka badan yihiin ragga marka loo eego dumarka. Isu-imaatin la'aanta testosterone ee labada jinsi waxay keeni kartaa dhibaatooyin daran oo laga yaabo inay ka sii daraan haddii dhibaatada aan la daaweyn waqtigeeda.
Shaxanka qiyaasaha testosterone
Celcelis qiyaasta ah
Biyaha lagu keydiyo
Saameyn wanaagsan Tamarta hagaagsan
Proviron iyo Nolvadex
ClomiGen iyo NolvaGen
Cudurka baaritaanka iyo baaritaanka testosterone testosterone
Imtixaanka kormeerida 315-37-7
Celcelis qiyaasta ah 250-750 toddobaadkii
Half-nolosha 2-3 toddobaad
Biyaha lagu keydiyo Haa
Action Saameynta gaaban
Saameyn wanaagsan Tamarta kordhay
Dhibaatooyinka ay keento Timo luminta, finanka, haynta biyaha iyo baaritaanka qallalka.
Ilaalinta Mid ka mid ah tabaha Nolvadex iyo dayactirka maalin kasta
Recovery Clomid 1 tab ee 20 maalmood
Iskudhafka "testosterone decanoate" iyo testosterone Isocaproate
Qalitaanka tijaabada ah 5721-91-5
Imtixaanka Isocaproate 15262-86-9
Celcelis qiyaasta ah 50-100mgs maalintiiba
Half-nolosha Decanoate, 3-4 usbuucyada
Isbuucyo Isocaproate 2
Biyaha lagu keydiyo Ugu yar
Saameyn wanaagsan Tamarta la hagaajiyay, muruqyada adag iyo guulaha xoogga.
Dhibaatooyinka ay keento Maqaarka luminta, ginecomastia, finanka iyo qanjirrada testicular
Ilaalinta 1 tab ee Nolvadex iyo Proviron inta lagu jiro wareegga wareegga
Recovery Clomid -1 maalin kasta oo loogu talagalay maalmaha 20 ka dib maalinta ugu dambeysa ee daaweynta.
HCG 2500-5000IU toddobaadle, 20days ka dib maalinta ugu dambeysa ee wareega daaweyntaada.
Baaritaan aan baaritaan lahayn (daaweyn)
Half-nolosha Aad u dheer
Celcelis qiyaasta ah Toddobaadyada 1000mg / 14
Action Aad u dheer
Saameyn wanaagsan Xoojinta soo kabashada, dheecaan ka sii fiican, tamar kordha, iyo xoogga muruqa
Dhibaatooyinka ay keento Xanuun, timo lumis ah, qanjidhada qanjidhka iyo ginecomastia.
Ilaalinta 1 tab ee dayactir iyo Nolvadex maalin kasta wareegga daaweynta
Recovery Clomid - hal kiniin maalin kasta 20 maalmood kadib daaweynta.
Celcelis qiyaasta ah 250mg / toddobaadkiiba
Half-nolosha 1-3 toddobaad
Action Hawl iyo gaaban
Saameyn wanaagsan Soo kabashada wanaagsan, xoogga iyo muruqyada cufnaanta, tamarta la hagaajiyay, iyo dheecaan ka sii fiican.
Dhibaatooyinka ay keento Timo luminta, finanka, ginecomastia iyo qanjirrada testicular.
Ilaalinta Proviron iyo Nolvadex - 1 tabo / maalintii oo dhan wareega daaweyntaada
Clomid-1 maalin kasta oo loogu talagalay 20 maalmood ka dib wareegga
HCG - qaado qiyaas kasta oo ka bilaabma 2500-5000 IU asbuuc kasta 20 maalmood kadib wareeggaaga.
Maxay yihiin kuwa ugu sareeya ee testosterone 10?
Xalka loogu talagalay testosterone la'aanta ah waa inaad caawimaad caafimaad ka raadsatid rugta caafimaadka ee kuugu dhow. Qalabka testosterone waa daawooyinka caadiga ah ee loo isticmaalo in lagu daaweeyo baaritaanka hoose ee hoose iyo dhismaha murqaha. Waxaa jira suuqyo kala duwan oo loo yaqaan 'testosterone' oo laga heli karo suuqa, si kastaba ha ahaatee, kaliya ha ka iibsan miiska, soo qaado takhtarkaaga saxda ah. Qalabka testosterone waxaa inta badan isticmaala cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha kuwaas oo raba in ay dhistaan ​​muruqyadooda jirka. Qaar ka mid ah hormoonayaasha testosterone testers waa sida soo socota;
1. Hormoonkaas Acetate
Baaritaan Astonta ayaa ka mid ah aasaasayaashii tijaabada ahaa ee ugu horeeyay ee lagu soo bandhigo daaweynta. Waxaa la soo qoray markii ugu horeysay ee 1936. Testosterone acetate waa daawo dhakhso leh oo ku timaadda qaabka hormoonka labka ah ee labka ah. Waxay ku faaftaa xawaaraha dhiiggaaga taasoo ka dhigaysa mid ku habboon bukaanno ama ciyaartoy badan. Marka loo eego arjiga, dhererka 'acetate' wuxuu bilaabmayaa inuu si dhakhso ah u shaqeyn karo oo ka hor imanaya qiyaasaha kale ee loo yaqaan 'testosterone tests' kuwaas oo qaadan kara waqti. Sababtoo ah qiyaasta qiimaha yar ee testosterone nolosha nuska ah, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato qadar yar ka dib 2 kasta illaa maalmaha 3 si loo ilaaliyo heerarka testosterone oo ku xiran isbeddel.
Injirta tijaabada ah ee "testosterone acetate" ayaa laga yaabaa inay xanuun noqoto waxayna keeni kartaa barar ama raaxo darro meelaha duritaanka. Isticmaalayaasha cusub waxay mar walba dareemi doonaan xanuun muddo ah, laakiin ka dib marka jirkaaga loo isticmaalo qiyaasta, waad fiicnaan doontaa. Si kastaba ha noqotee, haddii saameyntu sii socoto, u sheeg dhakhtarkaaga inuu ku siin karo kala doorasho kale.
Hormoonkaas Aqiyaas qiyaasta
Qiyaasta tijaabada ah ee tijaabada ah waxay kuxirantahay daawada dhakhtarku kuu qoro ka dib markaad eegto xaaladdaada. Si kastaba ha noqotee, qiyaasaha caadiga ah waxay kala duwan yihiin 100mg, 200mg, 500mg, iyo 1000mg laakiin xasuuso oo kaliya qiyaasta saxda ah ayaa bixin doonta natiijooyinka la rabay. Qiyaasta waa in loo qeybiyaa dhakhtarkaaga, asbuuciiba ama maalin kasta kadib baaritaan caafimaad. Dadka qaarkood waxay u baahan doonaan oo kaliya qiyaaso yar yar halka kuwa kale ay kordhayaan qiyaasta qiyaasta. Ha iibsanin daroogada adigoon talo bixin dhaqtarkaaga sababtoo ah waxay u horseedi kartaa saameyno daran oo tijaabo ah. Haddii aad tahay qof cayaariye ah waxaad aadi kartaa baaritaanka jirka ee testosterone acetate kaas oo kaa caawin doona inaad kor u qaaddo muruqyadaada iyo cufnaanta jirka.
Baaritaan Astonta Bodybuilding
Iyadoo ay jirto CAS NO: 1045-69-8, testosterone acetate waxay ka mid tahay steroid ugu dhaqsaha badan suuqa oo hadda ku guuleystay qalbiga jimicsi badan oo xirfadlayaal ah. Daroogadu waxay u bilaabantaa isla markiiba ka dib markaad qaadato qiyaastaada. Waxay kicisaa wax soo saarka hormoonada testosterone ee jirkaada kaas oo ka caawiya unugyada kala duwan si ay u koraan muruqyadaada iyo dufannada gubashada. Sida jir-dhiseyaasha, waxaa sidoo kale lagaa doonayaa inaad raacdo qiyaasta qiyaasta tababarka iyo cuntada saxda ah si aad u hesho natiijooyinka la rabay. Daroogadu waxay ku jirtaa labada foom oo afka iyo afka ah oo ku xiran. Sidaa darteed adiga ayay tahay, inaad go'aansato qaabka ugu fiican ee adiga. Si kastaba ha ahaatee, dhakhtarkaagu wuxuu noqon doonaa qofka ugu fiican ee kaa caawiya inaad sameyso go'aanka saxda ah kadib baaritaanka caafimaadka.
Baaritaan Astonta Half nolosha iyo wareegga
Daawada loo yaqaan testosterone acetate oo ka mid ah daroogada ugu dhaqsaha badan waxay leedahay nolol 2 maalmaha 3 iyo wareega daaweynta ee aan ka badnayn toddobaadyada 12. Dhakhtarku wuxuu la iman doonaa qiyaasta ugu fiican iyo wareegga testosterone acetate iyadoo ku xiran xaaladdaada caafimaad iyo baahiyahaaga. Waxa kale oo jira ikhtiyaari ah qiyaasta maalinlaha ah iyo todobaadkii, u sheeg dhakhtarkaaga waxa aad ku qanacsan tahay, iyo inuu kuu caawin doono. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa daroogada si wadajir ah oo kale ah sida Proviron si loo yareeyo saameynta ay leedahay saameynta daawada.
Baaritaan Astonta Faa'iidooyinka
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee testosterone acetate waa;
Wuxuu xoojiyaa koritaanka murqaha
Waxay hagaajisaa muruqyada iyo dib u soocelinta unugyada
Hagaajinta waxqabadka jidhka guud
2. Cootionate testosterone
Tani waa daroogo is isku duro oo aad isku duri karto muruqyadaada ka dib marka lagu muujiyo sida loo sameeyo dhakhtarkaaga. Cootionone testosterone for sale waxaa ku hoos jira magaca calaamadda "Depo-Testosterone", waxaadna ka heli kartaa goobo internetka kala duwan ama dukaankaaga caafimaad. Xaalado badan, daroogada waxaa gacanta ku haysa dawlada sababtoo ah xooggeeda iyo saameynaha ay keeni karto haddii aan si haboon loo isticmaalin.
Cypionate testosterone oo leh CAS Nambarka 58-20-8, ayaa lagu sameeyey dhamaadka 1940s laakiin waxaa loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1951. Marka laga reebo isticmaalka caafimaadka, daroogadu waxay u adeegtaa kaalmo weyn oo loogu talagalay cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha. Waxay kicisaa wax soo saarka hormoonnada testosterone ee jirka oo muhiim u ah horumarinta iyo kor u kaca kobaca iyo sidoo kale jirka si xoog badan u siiyaan. Iyadoo ku xiran baahidaada, daroogada ayaa loo sameeyaa cirbadeynta ugu yaraan hal mar 1 kasta ilaa todobaadyadii XNUM. Waxaa lagugula talinayaa inaad u tagto baaritaanka caafimaadka si aad u ogaato qiyaasta saxda ah ee xaaladdaada ama baahidaada.
Cypionate testosterone qaabka ficilka
Natiijooyinka tijaabada baaritaanka waxay la mid yihiin dhammaan daroogooyinka kale ee ka tirsan fasalka ofrogen. Steroids kooxdan daaweyntu waxay u shaqeysaa si isku mid ah waxayna ula dhaqmaan shuruudo isku mid ah. Cypionate testosterone ayaa ku habboon daaweynta cudurka hypogonadism ee ragga ilaa ay ka bedesho testosterone in jidhkaaga uusan ku jirin meel uu soo saaro. Dhakhtarkaaga ayaa si fudud u qori kara cirbada lafa-indoorka (testosterone cypionate) ka dib marka la baaro xaaladdaada. Qaar ka mid ah saameynada caadiga ah ee aad la kulmi doonto ka dib markaad isticmaasho daroogada ayaa ah xanuunka ama bararka ku wareegsan aagga la muday, korriin dheeraatay, iyo madax xanuunka dadka kale.
The sicirada qanjidhada ee testosterone waxay ku kala duwanyihiin hal iibiye mid kale, sidaas daraadeed cilmi-baaristaada ugu horreyn si aad u hesho iibiye sumcad leh oo ku kalsoon oo bixiya daawada qiyaasta daawada qiimo macquul ah. Dhakhtarkaaga ayaa sidoo kale ka ciyaari kara kaalin muhiim ah oo kaa caawinaya inaad hesho qiyaasta "cypionate testosterone" oo quman qiimaha la awoodi karo. Qaadashada qiyaasta daawada xad-dhaafka ah waxay keeni kartaa waxyeelo daran, sidaa darteed mar walba hubso inaad raacdo talada dhakhtarkaaga.
Cypionate testosterone qiyaasta
Tani waa daroogo la isku duro oo leh qiyaasta daawada loo yaqaan 'testosterone testosterone' ee qiyaasta 200 ilaa 800mgs wiigii. Dhakhtarkaagu wuxuu kuu qori doonaa qiyaasta saxda ah iyadoo ku xiran heerkaaga wareegaaga iyo waxa aad rabto in aad gaarto dhamaadka wareegga. Cirbadeynta waa in lagu maamulaa murqaha gacantaada ama lugahaaga. Dhakhtarkaagu wuxuu bixin karaa toddobaadle ama toddoba toddobaad, ama waxaad sidoo kale aadi kartaa qiyaasta bil kasta.
Cypionate testosterone Half nolosha
Cudurka steriotide testosterone wuxuu leeyahay nolol firfircoon illaa maalmaha 8 wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha dheeraadka ah ee loo isticmaalo jirka jirka ee xirfadleyda ah. Cypionate testosterone cypionate waa in la qaataa xilliyada 7 ee natiijooyinka wanaagsan.
Daroogada ayaa ah mid aad u fiican oo loogu talagalay jir-dhisayaasha iyo kuwa cayaaraha soo socda iyo ciyaartoyda. Cypionate testosterone ayaa jidhkaaga ku siinaya tamar ku filan oo ku haboon oo ku caawiya inaad ku guulaysato murqaha iyo jirka guud ee aad u baahan tahay. Raadinta natiijooyinka ay heleen isticmaalayaasha hore ee daroogada ka dib markii la soo bandhigay, waxaad xaqiijin kartaa inuu yahay daroogo siinaya fursad uu ku fiicnaado xirfadlaha jirka. Si kastaba ha noqotee, si aad uhesho ujeedooyinkaaga, waa inaad raacdaa daroogada hab raashin haboon iyo shaqeyn.
Cypionate testosterone Faa'iidooyinka
Qaybo badan oo xirfadle ah oo xirfad leh sida steroid tan iyo markii ay bixiso natiijooyin tayo leh iyo waqti aad u dheer. Waxaad dooran kartaa inaad tagto qiyaasta billaha ah gaar ahaan haddii aadan ku qanacsanayn cirbadaha todobaadlaha ah. Kuwa kale faa'iidooyinka loo yaqaan 'testosterone cypionate' waxaa ka mid ah;
Caawinta sii wadida muruqyada caatada ah
Fududeynta koritaanka murqaha
Sii daaweynta jirka ee muddada-dheer
Kordhi awoodda iyo tamarta jirka.
3. Dajinta tijaabada ah
Haddii aad raadinayso gunno ah oo kaa caawin doonta inaad dhisato murqahaaga, waxay ku siinaysaa tamar iyo sidoo kale inaad gubto dufanka jirkaaga ka dibna testosterone decanoate waa alaabta saxda ah ee adiga. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in testosterone uu soo galo noocyo kala duwan oo nooca aad dooraneyso uu saameyn weyn ku yeelan karo guusha guud ee hadafkaaga. Dhismayaal badan ayaa isticmaala TESTOSTERONE DECANOATE STEROIDS si ay u kiciyaan xayawaanka androgen ee jirka. Daawada ayaa sidoo kale soo bandhigeysa faa'iidooyin kala duwan sida gacan ka gaysiga hagaajinta galmada ragga loogu talagalay dadka qaba xanuunka erectile. Dhibaatooyinka muruqyada iyo jiritaanka, daawadani waxay u shaqeysaa sixir haddii aad raacdo qiyaasta saxda ah iyo cuntada.
Dajinta tijaabada ah ee loo yaqaan 'decosterate test' ayaa helay sumcaddeeda sababtuna tahay natiijooyin wanaagsan oo ay u bixiyaan dadka isticmaala. Ugu horreyntii, daroogada ayaa loo adeegsaday xallinta dhibaatooyinka testosterone ee hooseeya ragga, ka hor inta aan la ogaanin inay ka caawin karto jirka dhismaha inay gaaraan ujeedooyinkooda. Xaqiiqada ah in qiyaasta daawada lagu talaali karo oo kaliya hal mar toddobaadkii ayaa ka dhigaysa inay jeceshahay in badan oo jirka ah ee xirfad-yaqaanada ah ee aan jeclayn qiyaasta daawada steroids. Dajinta tijaabada ayaa sidoo kale ah daawo aad u fiican oo ka caawisa kordhinta unugyada dhiigga cas ee jidhka. Muddo sanado badan ah tan iyo markii la soo bandhigay daroogada, waxaa caddaynaya in ay tahay xalka ugu fiican ee saameyn badan oo saameyn ku yeesha testosterone ragga iyo dumarka labadaba.
WKoofiyadu waa miyir-beelka tijaabada ah?
Decanoate waa dherer, iyo sida lagu qeexay horraantii maqaalkan, dhererka waa aalaha dabiiciga ah kaas oo ka caawiya daawooyinka farmasokinetiga ee wax kasta. Erayada fudud, waxay ka caawisaa qaadashada daawada adiga oo jidhkaaga kaaga oo saameyn weyn ku leh sida ay jidhkaagu uga soo horjeedaan. Ester ayaa go'aaminaya nolosha nuska ah ee daroogada iyo mudada uu jiri doono nidaamka jirkaaga. Qalitaanka tijaabada ah ee samaynta jirka wuxuu leeyahay nus nus maalmeedka 7, taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay oo keliya inaad daawada ku durto hal mar toddobaadkii. Taas macnaheedu waa testosterone daacad u ah sida miisaanku waa daawo aad u fiican ragga qaba dhibaatooyinka ku haynta muruqyada caatada ah.
Imtixaanka Hormariska Half nolosha
Ka dib markaad qaadato qiyaastaada daroogada waxay firfircoon tahay jirkaagaaga 7 ilaa maalmaha 10. Sidaa darteed, waa inaad qaadataa qiyaasta ugu yaraan hal mar toddobaadkii. Raac tilmaamaha dhakhtarka si aad u hesho natiijooyin fiican iyo inaad ujeeddooyinkaaga si habboon u gaarto.
Imtixaanka Dib-u-Celinta qiyaasta
Ujeeddooyinka jirka jirka ayaa ah qiyaasta tijaabada ah ee loo yaqaan 'testosterone decosterate dosanche range' laga bilaabo 250mgs ilaa 1000mgs asbuucii. Kuwa bilowga ah ee qaadanaya 250-500gms todobaadkii way fiicnaan doonaan, laakiin qiyaasta ayaa la kordhin karaa wareegga xiga. Cuntada iyo jimicsiga saxda ah ayaa ku habboon in lagu gaaro natiijooyinka ugu sarreeya iyo manfacyada.
Dajinta tijaabada ah faa'iidooyinka
Daawooyinka muhiimka ah ee testosterone decanoate ee aad ku raaxaysan doono adigoo isticmaalaya daroogada si sax ah waxaa ka mid ah;
Ku dadaal si aad ah u fududeynta kobaca murqaha
Hagaajinta iyo joogteynta muruqyada caatada ah
Kobcinta tamarta guud ama awoodda jirka.
Dhanka kale, testosterone decanoate iyo cypionate waxay u shaqeyn kartaa isku mid ah waxayna bixiyaan natiijo isku mid ah, laakiin farqiga u dhaxeeya nolosha nuska ah. Dhiigga qanjirta testosterone, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad qaadato hal mar qiyaasta toddobaadkii intaad ku jirto cypionate waa inaad isku durto ugu yaraan hal mar laba ama saddex maalmood. Waxyeellada ugu weyn ee daawadani waxay tahay inay joojiso soo saarida dabiiciga ah ee testosterone ee jirkaada taasoo macnaheedu yahay in jidhkaaga uusan awoodin inuu dhiso murqaha loo baahan yahay ka dib marka uu dhamaystiro wareegga daroogada. Iyada oo ku xiran awoodda jirkaaga, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto waxyeelooyin kala duwan oo keeni kara mararka qaarkood haddii aanad isticmaalin qiyaasta saxda ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhidid aan caadi ahayn, qulqulo ama finan mararka qaarkood. Had iyo jeer raac tilmaamaha dhakhtarkaaga iyo haddii ay dhacdo waxyeellooyin aan la ogeyn isaga / iyada.
4. Imtixaanka maqaarka
Tani waa daawo cirbad ah oo ku habboon daaweynta xaaladaha ay keenaan testosterone oo hooseeya sida aan awoodin in la dhiso murqaha, kacsanaanta ama qaan-gooyo daahirsan iyo dheecaan kale oo hormoon ah. Dhaqtarku waa inuu u qoraa istiraatiijiyadda baaritaanka, sababtoo ah waxay si khalad ah u isticmaali kartaa waxay keeni kartaa saameyn aan dib-u-noqosho lahayn.
Cudurka testosterone enanthate wuxuu ka mid yahay steroids ugu xooggan tan ugu caansan tan iyo markii loo sii daayo suuqyada 1930s. Ilaa hadda, daroogadu waxay sii ahaanaysaa mid ka mid ah steroid aadka loo doorbidayo oo ay sameeyaan jimicsiyaal xirfadlayaal ah iyo cayaaraha. Markii ugu horeysay, steroid-ta laguma dhejin wax dheef-shiid ah oo daroogada ka dhigtay in si dhakhso ah loo nuugo dhiigga. 1937, soo-saaraha ayaa bilaabay in uu isku daro daawada kiimikooyinka loo yaqaan 'ester chemicals' kaas oo badalaya wax kasta oo ku jira steroidkan. Sannadkan 1950, soo saaraha daroogada ayaa go'aansaday inuu ku daro agabka aerosiga ah ee daroogada ee daroogada siinaya awooda in badan oo jirka ah ay ku riyaaqayaan maanta.
Xanuun baaris ah 250 waa baako daroogo caadi ah oo aad ka heli karto suuqa. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta daawada ayaa kuu habeyn kartaa dhakhtarkaaga ka dib markaad baarto xaaladdaada. Ciyaartoyda, daroogada laysku duro ayaa kaa caawin doonta inaad hagaajiso waxqabadkaaga, laakiin waxay kugu caawineysaa inaad gaarto natiijooyinka aad rabto. Imtixaanka kobcinta jidhka jirka waxay ka caawisaa muruqyadaada waxayna xakameysaa dufanka jirkaaga. Markaad sii wado jimicsigaaga jirdhiska, waxaad yeelan doontaa murqaha iyo qaabka jidhka ee aad rabto. Haddii aad ku guul dareysato inaad hesho natiijooyin aad u yar, la xiriir dhakhtarkaaga wixii caawimo ah.
Diyaargarow tijaabo ah oo loogu talagalay iibka ayaa laga heli karaa farmasiyada kala duwan, iyo dukaamada internetka, si kastaba ha ahaatee, iibsashada daroogada hoos yimaada talo bixinta caafimaadkaaga. Dhibaatooyinka daroogadu waxay halis u yihiin haddii aad xad gudubto ama aad si xun u isticmaasho oo aan marna loo noqon karin. Si aad u noqotid dhinaca badbaadada, dhakhtarkaagu kuu qoro qiyaasta saxda ah ee adiga kugu habboon. Ka dib markaad wareegto tijaabada baaritaanka, waa inaad awood u yeelatid inaad aragto natiijooyinka, iyo haddii aanad wax arag, u sheeg dhakhtarkaaga.
testosterone Enanthate qiyaasta
Dhakhaatiir badan ayaa doorbidaya qiyaasta tijaabada ah ee shakhsi ahaaneed ee daawada ah inkastoo daroogada ay ku dhacdo qiyaaso kala duwan. Tusaale ahaan, qiyaasta daawada waxaa loo qaybiyaa sida ujeedooyinka aad rabto in aad u hesho si aad u hesho wax badan haddii aad tahay jirka jirka - qiyaasta qiyaasta daawadan ee 250mg maalin kasta ilaa 750mgs asbuucii. Xaaladaha qaarkood, kuwa jidhka qaata waxay qaataan qiyaaso sarreeya illaa toddobaad todobaad. Qiyaasta qiyaasta ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa heerka wareegga wareeggaaga, waayo qiyaasaha hoose ee qiyaasaha ayaa lagula talinayaa taas oo la kordhin karo mar dambe.
Imtixaanka Horumarinta Half nolosha
Baxnaanada testosterone waxay leedahay nolol firfircoon oo ka mid ah maalmaha 10.5, waana inaad qaadataa cirbadeynta qiyaastaada ka dib maalmaha 10. Si kastaba ha noqotee, dhakhtarkaagu wuxuu kuu habeyn karaa qiyaas saxan ee toddobaadlaha ah kaas oo awood u siin doona inaad hesho xoog iyo dhisato murqaha.
Baxnaanada imtixaanka ayaa leh wareegyo kala duwan iyadoo ku xiran heerkaaga, dhakhtarkaagu wuxuu ku jiri doonaa booska ugu fiican si uu u qaabeeyo midka ugu fiican. Tusaale ahaan, wareegga cusub ee testosterone enanthate waxaa ka mid ah isticmaalka qiyaaso yar yar iyo kuwa kale afka sida Arimidex iyo Deca-Durabolin. Wareegga hore ee wareegga labaad, qiyaasta ayaa la kordhiyaa ka dib marka jirkaaga loo isticmaalo qiyaasaha bilowga ah. Daroogada halkan waxaa loo isticmaalaa Dianabol 40mgs maalin kasta wareegga oo dhan. Miisaanka adag waa heerka ugu sarreeya ee u fiican kuwa isticmaala tijaabada ugu wanaagsan ee imtixaanka, iyo halkan qiyaasta waa mid aad u sareysa.
Faa'iidooyin tijaabo ah oo loo yaqaan 'testosterone enanthate'
Daawadani waxay xaqiijisay in ay kaalin muhiim ah ka qaadato kobcinta xirfadaha jirka iyo cayaaraha. Marka si sax ah loo qaato daroogadu waxay keeni kartaa saameyno kala duwan, faa'iidooyinka loo yaqaan 'testosterone enanthate' kuwaas oo ay ka mid yihiin;
Kordhinta iyo hagaajinta muruqyada
Hagaajinta unugyada dib u soo kabashada ka dib shil ama xayiraad inta lagu jiro hawlgallada.
Kordhi awoodda jirka iyo tamarta guud ee ka caawiya cayaaraha iyo jirdhiska inay gaaraan ujeedooyinkooda.
Dufanka jirka gubi oo caawiya jidhka si aad u hesho qaabka jidhka ee ay u baahan yihiin.
5. Phenylpropionate testosterone
Phenylpropionate (testosterone phenylpropionate) (BAN) (magaca saxda ah ee tijaabada), ama phenylpropionate testosterone, haddii kale loo yaqaan 'testosterone hydrocinnamate', waa farsamada anabolic-androgenic steroid (AASraw) iyo esterogen ester - si cad, C17β phenylpropionate ester testosterone - oo mar hore ku soo kordhay Romania. Waxaa markii hore lagu soo bandhigay qoraallada sayniska ee 1955 waxaana uu ahaa qayb ka mid ah waxyaabo kala duwan oo Aasaaso ah, oo aan waligeed loo adeegsan. Fetylpropionate testosterone sidoo kale wuxuu ahaa mid aad u badan qayb ka mid ah Sustanon iyo Omnadren.
Phenylpropionate testosterone ayaa markii ugu horeysay lagu sii daayay suuqa 1955 oo ay ku iibisay farmasiga Sicomed, laakiin waxay ku iibineysay astaanta magaca markale. Daawada lama helin xataa suuqa madow kadib markii la sii daayay. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay waxaa la heli karaa, waxaana si wanaagsan u heley jir-dhisayaasha iyo sidoo kale ciyaartoyda. Daawada ayaa qayb ka ah isku darka kale ee testosterone sida Omnadren.
Phenylpropionate (testosterone phenylpropionate) waa daawo lagu dhejiyo aaladda daawooyinka loo yaqaan 'androgens'. Fetylpropionate testosterone waa daawo ay tahay in la maamulo duritaanka. Ka dib mudista, daroogada ayaa weli firfircoon qiyaastii shan maalmood markaa kadib waxaad qaadan kartaa qiyaas kale. Daawada waxaa loo isticmaali karaa si madaxbannaan ama loo maamulo qiyaasaha kale ee loo yaqaan 'testosterone testosterone' ee daaweynta testosterone ee bukaanka oo leh xaqiijin la'aanta testosterone. Dhinaca kale, isticmaalka mukhaadaraadka caansani waa mid ku habboon hagaajinta jirka jirka iyo murqaha.
Calaamad wanaagsan oo dadka isticmaala ay ka fekeraan waxyaabahaas waxa weeye in jawaab-celinta biyaha sida caadiga ah ay u muuqato waqti uun. Intaa waxaa dheer, adigoo qaadanaya fenylpropionate testosterone, jidh-dhisayaasha waxay soo sheegaan kordhin dheeraad ah, rabsho, iyo tayada. Dhammaanba adoo adeegsanaya noocyadan testosterone sida saxda ah saameyntu waxay la mid tahay kuwa kale ee qiyaasaha testosterone laakiin uma baahnid in ay si degdeg ah u booqdaan infusions, ama waxay keenaan dayactir biyaha.
Faa'iidooyinka phenylpropionate testosterone
Steroid testosterone steroid testosterone ayaa helay caan ka mid ah jirka dhismayaasha sababtoo ah saameyn heer sare ah ee jirka. Qaar ka mid ah dadka la yaqaan faa'iidooyinka phenylpropionate testosterone waxaa ka mid ah;
Hagaajinta dhismaha murqaha iyada oo hagaajineysa awooda xajinta nitrogen.
Kor u qaadida tamarta guud ee jirka, sidaas oo ay u suurto galinayso cayaartoyda inay muddo dheer shaqeeyaan oo ay helaan natiijooyinka la rabo. Waxa kale oo ay hagaajineysaa waxqabadka guud ee jirka jirka iyo cayaaraha.
Xasilinta unugyada dhiigga cas ee jidhka.
Yaree oo gubi dufanka jirka.
Qalitaan tijaabo ah Phenylpropionate Half nolosha
Phenylpropionate testosterone waa daawo laysku duro oo leh nus-dhiman 3 maalmaha 4. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad qaadato qiyaastaada hal mar maalmaha 4. Dhaqtarka caafimaadka ee xirfadlaha ah waa inuu maamulaa cirbadeynta.
Qiyaasta phenylpropionate ee tijaabada
Ciyaartoyda badan ama kuwa jir-dhiseyaashu waxay isticmaalaan daroogada laba jeer toddobaadkiiba ama labadii maalinba mar. Midka saxda qiyaasta phenylpropionate testosterone waxay u dhaxeysaa 300gm ilaa 3000mg asbuucii. Si kastaba ha ahaatee, saameynaha fal-abuurka phenylpropionate testosterone ayaa ka daran marka loo eego kuwa kale ee steroids.
Isticmaalka steroid testosterone phenylpropionate waxaa loo isticmaali karaa sheyaal kale oo gaaban oo ka yar wareega toddobaadka 10. Xilliga firfircoonaanta farsameedka ee tijaabada ah waa inuu ku jiraa wareegga tijaabada ee qiyaasta 300mg toddobaadkii iyo NPP oo leh qiyaas lagula talinayo 300mg asbuucii. Wareegga gaaban waa in uu ka hooseeyo 10 toddobaad gudahood jirka dhismaha.
6. Iskudhafka Iskudhoorka
Isocaproate waa dherer ku xiran steroid anabolic. Waa aalado oo la mid noqon kara steroids sida Cypionate caan ah ama Enanthate ester. Sida Cypionate iyo Enanthate, Isocaproate sidoo kale waxaa lagu lifaaqi karaa hormoonka testosterone, si kastaba ha ahaatee, marka la eego Isocaproate, tani waxay sida caadiga ah noqon doontaa meesha ugu horeysa ee aynu u aragno inay ku biirtay. Testosterone-Isocaproate, qaabka monoester oo aan la maqlin; marka aad fursad u heshid, waxay ahayd wax badan oo laga yaabo inay sheegtaan inay caanuhu diyaarinayaan, mana jirto baahi kasta oo ay waligeed u leedahay imtixaan Iskudhaafto Iskudhaafto sida hal-abuur. Halka aan ka heleyno aaladda isocaproat ugu caadi ahaan iyo meesha ay u adeegto ujeedo sareysa waa isku dardarka testosterone; si cad Omnadren iyo Sustanon 250. Omnadren iyo Sustanon-250 waa labada xarriijimo ee loo yaqaan 'testosterone both' iyo 'four esters attached'; afar qiyaas oo qiyaaso kala duwan oo ka kooban hal isku dhafan oo loo yaqaan 'testosterone compound'.
Isosaproate testosterone waa ester, waana mid la heli karo marka lagu lifaaqo steroids sida Omnadren iyo Sustanon 250. Taariikhda qoob-ka-ciyaahaan waxaa laga heli karaa 1970s marka Sustanon 250 la sii daayay suuqa. Doorka Isku-xidhka Isocaproate waa inuu u oggolaado daroogada in uu sii dheeraado jirkaada oo u oggolaado xeryahooda kale ee steroid inay si firfircoon uga shaqeeyaan. Isosaproat ester wuxuu siinayaa steroids nolol badhkeed oo ka bilaabma maalmaha 7-9.
Iskudhafka Iskudhoorka qiyaasta
Maadaama Isocaproate aaney si madax-bannaan u jirin, qiyaasta daawada isocaproate testosterone waa kala duwan tahay iyadoo ku xiran hadba meesha lagu darey. Tusaale ahaan, Sustanon 250 ku darista cunnaydkan waa 60mgs iyo qiyaasta Sustanon 250 waxay u dhexeysaa 250mgs ilaa 1500mgms asbuucii. Dhakhtarkaaga ayaa kuu qori doona qiyaasta ugu fiican adiga oo ku xiran baahidaada.
Iskudhafka Iskudhoorka Half nolosha
Is-baadhitaanka Iskudhafroate wuxuu leeyahay nolol firfircoon ilaa illaa 7-9 taas oo macnaheedu yahay qiyaasta stero-ku-xireen kasta oo ku xiran aaladani waa in la qaataa hal mar toddobaadkii. Xataa haddii aad maanta buuxiso wareeggaaga, waxaad sii wadi doontaa inaad ku raaxaysato saameynta daroogada maalmaha soo socda.
Hormoonkaas Isocaproate Bwaxbadan
Gargaarka Isku-xirka Isku-xirka Iskudhiga waxaa lagu saleyn karaa isku-dhafka sida Omnadren iyo Sustanon 250 waxaana loo kala saari karaa laba fasal oo isku-dhafan; awoodaha ay heleen sifooyinka kor ku xusan iyo waxa noocan ah ee dhismuhu ka dhigan yahay mid ka duwan qaabka halbeegga. Marka la eego marxaladda hore, awoodda qalfoofka testosterone waa in ay si fiican u noqoto labada caalamka dareen yar oo aad u sarreeya, iyo tani waxay bixisaa testosterone dhakhso ah oo leh saameyn wakhti dheer ah. Taasi waxay u egtahay in uu yahay wax yar oo aad u fudud, laakiin runta arrintu waa wax aan ka ahayn taas. Waqtigaan, waxaan leenahay faa'iidooyinka qaarkood iyadoo ku xiran sifooyinka kor ku xusan, iyo sida Omnadren iyo Sustanon 250 oo gabi ahaanba loo isticmaalo fulinta dilka, waxaanu kaliya xooga saaraynaa faa'iidooyinka nalalkaas.
Wixii cayaaraha ka baxsan xilliga fasaxa ah, shakhsiga u rajeynaya inuu helo tiro badan oo tiro badan oo tayo leh iyo tayada, qaababka Isocaproate ayaa ah go'aan ku haboon iyaga oo horay u sii wadaya labada dhinac. Dheeraad ah, adigoo dul saaran bay'ada dheef-shiid kiimikaadka, waxaad diyaar u tahay inaad hesho qadar dhaadheer oo leh muruq yar oo ku salaysan saamiga baruurta, oo ah qiimo aan qiimo lahayn. Isku darka isku midka ah ayaa loo isticmaali karaa si loo gooyo sidoo kale; Wax kasta oo la tixgeliyo, dheef-shiid kiimikaadku kor u kaco waxay kordhinaysaa awoodda dufan-qaadashada, iyo sida testosterone waa nadiifiye caan ah oo cufan ah oo kaliya waa go'aan cajiib ah oo loogu talagalay wax-qabad kasta.
Tani waa dhererka loo yaqaan 'testosterone shortestone' kaasoo si dhakhso ah u xoqaya dhiigga. Sidaa darteed, haddii aad u baahan tahay badeecad dhakhso leh, markaa tijaabada baaritaanka testosterone wuxuu noqon doonaa doorashada saxda ah. Si kastaba ha noqotee, daroogadu waxay leedahay hal maalin kaliya hal maalin. Sidaa daraadeed waa inaad daaweysaa dawada maalin kasta illaa dhammaadka wareegga. Qiimaha tijaabada ah ee testosterone propionate kala duwan yihiin hal iibiye ilaa iyo qiyaasta aad doorato. Isbarbardhigga barta tijaabada ee testosterone vs cypionate, oo ku saabsan wax ku oolnimada waxaad dooran kartaa propionate tan iyo markii uu shaqeeyo maalin gudaheeda, laakiin waa inaad qaadataa qiyaastaada maalin kasta.
Sida steroids kale, propionate testosterone ayaa la sameeyay horaantii 1930s oo loogu talagalay in lagu caawiyo hagaajinta heerarka hormoonada testosterone ee jirka. Daawada hadda waa mid caalami ah oo caalami ah oo ka mid ah jir-dhiseyaasha si loo caddeeyo inay muhiim u tahay caawinta iyaga si ay u gaaraan ujeedooyinkooda. Muddo tobanaan sanadood ayaa dalabka daroogada ayaa kor u kacay iyada oo la tixgelinayo faa'iidooyinka ay u soo bandhigto dadka isticmaala kuwaas oo ay ka mid yihiin wanaajinta faa'iidooyinka hormoonka hormoonka ah sida dhisidda murqaha. Ninka sifooyinka ah ee hormoonkan keena ayaa sidoo kale sabab u ah dalabka sare.
Tijaabin tijaabo ah qiyaasta
Bilowga tijaabada testosterone propionate waxay dalbanaysaa inaad bilowdo qiyaaso yaryar kaas oo ka bilaabma 50-100mgs in la iska duro kadib maalmaha 2-3. Qiyaasta toddobaadlaha ah ee tijaabada baaritaanka testosterone waxay kala duwan tahay 200 ilaa 500mgs.
Daroogadu waxay dhalin kartaa waxyeelo daran oo loogu talogalay dadka bilowga ah ee qaata qiyaasta xad-dhaafka ah markii ugu horreysay. Dhakhtarkaaga ayaa ku siin doona qiyaasta saxda ah ka dib baarista xaaladdaada. Waxaad dareemi doontaa saameynta testosterone propionate ka hor iyo ka dib qaadashada. Xusuusnow mar walba inaad raacdo tilmaamaha qiyaasta. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan ku qanacsaneyn qiyaasta maalinlaha, waxaad tagi kartaa cirbadda bilawga ah.
Tijaabin tijaabo ah Half nolosha
Kiniiniyada tijaabada ah ee testosterone waxay leeyihiin nolol kala duwan oo ah saacadaha 24 laakiin jadeecada la mudo waxay leedahay nolol firfircoon ilaa toddobaadyo XNUM. Dhakhtarkaaga ayaa kuu habeyn doona mudada ugu habboon ee qiyaasta ah ee kuu suurtogelinaya inaad hesho natiijooyinka aad rabto.
Ka dib markii daroogada loo sii daayay suuqa Soomaliya. Waxaa la baaray loona xaqiijiyay inuu gacan ka geysto kor u qaadida awooda jirka iyo sidoo kale kor u qaadida murqaha. Daroogadu waxay bixisaa muruqyada leh nafaqooyin habboon oo iyaga u saamaxaya in ay koraan iyo marka qofku isticmaalo jimicsi ku habboon wuxuu hubsan karaa inuu helo jumlada jirka ee looga baahan yahay cayaaraha. Joogitaanka hormoonada testosterone ee jirkaada macnaheedu waa in aad leedahay faa'iidooyin badan marka laga reebo dhismaha murqaha sida naftaada oo ka dhigan sida codka qoto dheer iyo koritaanka timaha wejiga ah ee dadka kale.
Si kastaba ha ahaatee, la-talinta dhakhtarkaagu wuxuu noqon doonaa habka ugu amniga badan ee lagu ogaan karo natiijooyinka tijaabada ah ee testosterone. Cuncun ama barar ku wareegsan goobaha duritaanka ayaa caadi ah, laakiin waa in la iska daayaa wakhti yar ka dib haddii saameyntu aysan ka tegin markaa dhakhtarkaagu markiiba ku soo noqo. La wadaagida daawada ee jir-dhiseyaasha kale waxay noqon kartaa mid halis ah maadama aadan hubin sida daroogadu uula dhaqmi doonto jirkaaga. Baaritaanka caafimaadka waa mid aad u muhiim ah ka hor iyo ka dib qaadashada qiyaasta daawada ee testosterone.
propionate testosterone faa'iidooyinka
Wuxuu gargaaraa helitaanka muruqyada caatada ah
Koritaanka murqaha muruqa
Dufanka caloosha ku gub.
8. Imtixaanka Sustanon 250
Sustanon 250 steroid waa daroogada cirbadaha loogu talagalay ragga ay hayso wax soo saarkooda hoose ee testosterone iyo heerarka diidaya faa'iidooyinka badan. Sustanon 250 waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay horumariyaan sifooyinka labka ah ee ay rabaan sida codka qoto dheer, xoojinta murqaha iyo xitaa koritaanka timaha jirka ama wajiga wajiga.
Sustanon 250 waa steroid ah oo ay soo saartay shirkadda Organon ee 1970s si ay uga caawiso ragga in jidhkoodu uusan soo saarin hormoonnada testosterone ku filan. Daroogada ayaa heshay caan ah waqti gaaban kadib markii la sii daayay suuqa sababtoo ah waxay cadeeyeen in ay tahay xalka dhabta ah ee cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha. Sustanon 250 waxaa la sameeyey iyadoo la isku darayo 4 kala duwan oo tijaabo ah oo ka mid ah 30mg of testosterone propionate, 60mg-testosterone phenylpropionate, 100mg-testosterone decanoate, iyo 60mg-isocaproate. Halabuurka wuxuu ka dhigayaa badeecada xoog leh waxayna faa'iido u leedahay labadaba jirka iyo dhibaatooyinka kale ee testosterone.
Sidee loo isku duraa Sustanon 250
Daawadani waxa kaliya oo la bixin karaa hal mar toddobaadkii ama maalmaha 3 ka dib sababtoo ah awoodeeda taasoo u suura galineysa inay jidhkaaga ka shaqeyso maalmo yar. Si kastaba ha ahaatee daroogada ayaa laga mamnuucay hay'ada caalamiga ah ee ladagaallanka doping, sidaa daraadeed ma aha mid ku haboon ciyaaraha fudud. Waxaad isku duri kartaa dawada muruqaaga adiga ama jadwalka booqashada joogtada ah ee rugta si aad uga hesho duritaanka dhakhtarkaaga. Nolosha qaybta daroogada ayaa ah mid aad u jilicsan, taas oo ku haboon dadka isticmaala badan laakiin had iyo jeer daawo qiyaasta si looga fogaado waxyeelada.
Sustanon 250 loogu talagalay jirka jirka
Asal ahaan, iyada oo aan jirkaaga hoormoonka jirka ee ku filan, waxay adkaan doontaa in lagu gaaro muruqyada aad rabto sida jirka jirka. Waxba ha ahaato cuntada ama shaqada aad qabato maalin walba, waa inaad leedahay hoormoonka labka ah si kor loogu qaado waxqabadkaaga. Daroogadu waxay u shaqeysaa iyada oo kicinaysa jirkaaga si ay u soo saarto estrogen dheeri ah, sidaas oo ay ku gaari karto heer qiyaas ah tijaabo ah. Sustanon 250 waxay ka caawisaa xalinta dhibaatooyinka dhan ee ay sababaan heerarka hoose ee testosterone oo ay ku jiraan dhismaha iyo ilaalinta muruqyada caatada ah.
Imtixaanka Sustanon 250 qiyaasta
Qiyaasta saxda ah ee Sustanon 250 ee loogu talagalay jidh-dhiska waa inay kala duwanaadaan 250mgs-1500mgs asbuucii. Si kastaba ha ahaatee, 500-750mg waa daawada ugu badan ee la qaato toddobaadkii. Dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay dareemaan raaxo la'aan Sustanon 250 cirbadeynta saddex maalmood ka dib, laakiin qiyaasta qiyaasta toddobaadka ah waxay noqon doontaa fikrad wanaagsan.
Waa maxay guulaha Sustanon 250?
Horumarka ugu muhiimsan ee aad ku raaxeysan doonto ka dib markaad isticmaasho daawadani waa testosterone joogta ah saddex toddobaad kadib mudista. Taas macnaheedu waa inaad awood u leedahay jirkaaga iyo jinsiga aadka u fiican ee ka mid ah guulaha kale ee testosterone. Dhinaca kale, haddii aad u isticmaasho daroogada muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad tagto tijaabo dhiig si aad ula socoto heerarka testosterone. Xusuusnow heerarka hoormoonka hooseeya ama xad-dhaafka ah waxay noqon karaan khatar. Faa'iido kale oo aad ka faa'iideysan karto qaadashada daawadani waxay kor u qaadeysaa oo joogteynta muruqyada caatada ah.
Imtixaanka Sustanon 250 wareegyada
Wareegyada Sustanon 250 waxaa ka mid ah oralaal kale maadaama aad ka heli kartid muruqyada caatada ah ee aad u baahan tahay, adoo isticmaalaya Sustanon kaliya. Waa halkan wareegga xajmiga rasmiga ah ee Sustanon;
Week Sustanon250 Dianabol Ostarin
1 500mgs / toddobaad 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
2 500mgs / toddobaad 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
3 500mgs / toddobaad 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
4 500mgs / toddobaad 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
5 500mgs / toddobaad 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
6 500mgs / toddobaad 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
7 500mgs / toddobaad OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
8 500mgs / toddobaad OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
9 500mgs / toddobaad OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
10 500mgs / toddobaad OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
11 500mgs / toddobaad OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / toddobaad
* ed ayaa macnaheedu yahay maalin kasta / maalin kasta
9. Baaritaan la'aan Baaritaan la'aan
Kani waa daroogada mudada dheer socota ee ka timaadda kabbab ama mid la isku duro. Doorashadu waa had iyo jeer, laakiin labada nooc ee qiyaasuhu way kala duwan yihiin waxtarka. Daawada ayaa u fiican ragga oo leh heerarka hoose ee testosterone ama jidhkooda ma awoodaan inay soo saaraan hormoonka loo baahan yahay. Testosterone Undecanoate waxay ka caawin kartaa horumarinta sifooyinka jirka ee haweenka sida xoojinta codka, qaybinta dufanka iyo dhismaha murqaha.
Baaritaan la'aanta baaritaanka waxaa lagu sameeyay 1980's by shirkadda Organon Drug oo loogu talagalay in lagu bixiyo daawada testosterone oo aan u marin beerka. Sidoo kale, daroogadu waxay ahayd fikrad ah inay abuurto sterooto anabolic (AASraw) kuwaas oo ka caawin kara daaweynta wax soo saarka testosterone ee ragga. Si kastaba ha noqotee, hordhaca qiyaasaha kale ee testosterone ee caddaynaya in ay ka xoog badan yihiin bixinta natiijooyinka, testosterone undecanoate ayaa si tartiib ah u lumiya caan ka mid ah xirfadlayaal badan oo xirfadleyda iyo cayaaraha.
Sidee baaris la'aan aan baaritaan ku sameyn shuqullada
Baaritaan la'aanta baaritaanka testosterone wuxuu maraa nidaamka lymphatic iyo ma aha beerka sida steroids kale. Sidaa daraadeed, daroogadu waxay gasho dhiigga iyada oo aan la burburin ama ay saameeyeen beerka taas oo micnaheedu yahay inaad ka heshay saameynta ugu badan. Nidaamka steroid ee jidhkaaga ka soo baxa wuxuu ka duwan yahay steroids kale.
Hoormoonka hormoonka jinsiga ayaa kaalin muhiim ah ka leh jirka si uu u lumiyo dufanka, uuna helo awood iyo dhisida murqaha ragga kale ee sifooyinka. Dhakhaatiir badan oo xirfadlayaal ah iyo kuwa jidh-dhiska ayaa ka faa'iidaysta daroogada si kor loogu qaado muruqyada iyo sidoo kale hagaajinta waxqabadka. Inkastoo testosterone undecanoate la sheegay in uu yahay steroid daciif ah, waxay natiijooyin wanaagsan ku yeelan kartaa dhismaha muruqyadaada iyo jimicsigaada markaad qaadato qiyaasta sare ee ay weheliso cunto haboon.
Si kastaba ha noqotee, kuwa aan u isticmaalin daroogada si sax ah waxay la kulmi doonaan saameyno kale oo la daaweyn karo haddii aad la xiriirto dhakhtarkaaga waqtigaa. Tijaabinta jirka oo aan shaki ku jirin jirka jirka wuxuu noqon karaa mid weyn haddii aad u tagto cirbadeynta unugano ee unugano aanad qaadan karto oo keliya hal toddobaadyada 10 ama 14. Iyada oo ku xiran xaaladaada dhakhtarku wuxuu dejin doonaa qiyaasta iyo wareegga saxda ah ee baaritaanka saxda ah ee adiga kugu habboon. Qadarka kondomka ah ee testosterone qarsoodi ah noloshiisu waxay soconeysaa maalin, waana inaad qaadataa qiyaastaada maalin kasta.
testosterone Undecanoate Faa'iidooyinka
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee tijaabada ah ee testosterone ah waxaa ka mid ah;
testosterone Undecanoate Isugeynta
Wixii ka shaqeeya jirka ama cayaartoyda qiyaasta qiyaasta baaritaanka qiyaasta qiyaasta qiyaastii 480mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala kowaad, dhakhtarku wuxuu yareeyn karaa qiyaasaha tallaalka kadibna wuxuu kordhiyaa waqtiga. Markaad go'aansatid in daawada lagu daro steroids kale, 200-250mgs wuu fiicnaan doonaa. Daawada waa in la qaataa kahor cuntooyinka kahor quraacda iyo qiyaasaha fiidkii kahor intaan la cunin.
testosterone Undecanoate wareegyada
Waxaad u isticmaali kartaa steroidkaan oo weheliya oralska kale sida miyirka Durabolin, trenbolone iyo promobolan. Haddii aad dooratid in aad isticmaashid calaamadaha kale ee afka laga qaato, markaa waxaa lagugula talinayaa in aad u isticmaasho qadar yar sida 240mg maalintii. Cudurka daacuunka wuxuu u adeegi doonaa saldhigga imtixaanka wuxuuna siinayaa orals kale fursad uu si fiican u shaqeyn karo iyada oo aan la kulmin saameyno dheeraad ah oo dheeraad ah.
Week Andriol Ballanqaadka Aromasin Kaararin N2Guard
1 250mg / ED 600mgs / toddobaad 10mgs 20mgs / ED 5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / toddobaad 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / toddobaad 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / toddobaad 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / toddobaad 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
* ED micnaheedu waa maalin kasta ama maalin kasta
Tani waa daawo anabolic ah oo markii hore lagu soo saarey 1961 ee Jarmalka Jarmalka oo ay sameysay shirkadda daawada Jenapharm ee daweynta lafaha laf dhabarta. Daroogada ayaa heshay caan ka dib markii lagu soo rogay guulaha Olombikada Bariga Jarmalka ee 1960s ee 1980s. Turinabol waxaa hadda isticmaala cayaaraha iyo jir-dhisayaasha si loo hagaajiyo jirkooda iyo murqaha jirka oo ay weheliyaan tamarta ay u baahan yihiin si ay u wataan howlahooda. Dhaqdhaqaaqa jirka, waxaad ku guuleysan kartaa bartilmaameedyada aan la dabooli Karin haddii aad u isticmaasho daroogada si sax ah.
Sidee Turinabol ma sameeyo shuqullada
Qiyaasta daawada turinabol waxaa lagu heli karaa oo kaliya foomka kaabsoolka afka. Waqtigan xaadirka ah, ma jirto qaab daaweyneed oo loogu talagalay steroidskaan. Maya maya TURINABOL FOR SALE, iyo daroogada ayaa kaliya laga heli karaa shaybaarrada dhulka hoostiisa. Dalabka daroogada ayaa kor u kacaya marka la eego saameynta turinabol ee ay bixiso dadka isticmaala. Daawada ayaa loo yaqaanaa inay noqoto mid wax ku ool ah si loo hormariyo kobcinta borotiinka murqaha, hagaajinta qadarka nuugista nukleerka ee muruqyada iyo sidoo kale kordhinta unugyada dhiigga cas. Xaddiinta turinabol waxay kuxirantahay baahidaada, laakiin waxaad qaadan kartaa 50mg maalin kasta usbuuc ama laba toddobaad. Si kastaba ha ahaatee, dhakhtarkaagu wuxuu kuu habeyn karaa wareegga qiyaasta daawada ugu fiican ka dib markaad tixgelinayso xaaladdaada caafimaad.
Turinabol (Tbol) wuxuu u taagan yahay steroid ugu fiican ee loogu talagalay ciyaaro badan iyo jir-dhiseyaal sababtoo ah faa'iidooyinka waaweyn ee kor u qaadaya heerarka tamarta iyo xoojinta murqaha. U ogolaanshaha daawada leh cunto sax ah iyo jimicsi sax ah waxaad hubin doontaa inaad hesho natiijooyinka la doonayo. Steroidku wuxuu jidhkaaga siinayaa borotiinka muhiimka ah ee awood u siin kara muruqyada inay koraan iyo sidoo kale gubaan dufanka jirka. Isticmaalka daroogada, maaha inaad ka welwesho waxyeelooyinka estrogenic sida cirridka, biyaha lagu hayo, iyo dhiig karka. Sidaa darteed, kuwa u nugul dhibaatooyinka soo raaca waxay u roonaan doonaan daroogadaas.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka Thurinabol waxaad ku raaxeysan doontaa adiga oo isticmaalaya daroogadaas waxaa ka mid ah;
Hagaajinta xoogga muruqa
Sii muruqyada adag
Ku raaxeyso natiijooyinka adoon helin culeys
Heerarka hoose ee dhibaatooyinka soo raaca
Hagaajinta wax soosaarka dabiiciga ah ee hormoonka testosterone
Qiyaasta daawada Turinabol ee loogu talagalay ragga waa 20 ilaa 50gms maalin kasta, waxaadna u isticmaali kartaa oraahyo kale oo ah natiijooyin wanaagsan. Waxaa jiray fikrad khaldan ah oo ah sida jirka jirka ah inaad u isticmaasho qadar sare si aad u hesho natiijooyinka. Dumarku waa inay qaataan qadar yar oo ah sambabada 2.5 ilaa 7.5mgs maalintiiba tan iyo maadada sare waxay u horseedi kartaa wax-qabadka.
Turinabol Half nolosha
Turinabol (Tbol) wuxuu leeyahay nolol kala duwan saacadaha 16. Sidaa daraadeed waa inaad qaadataa qiyaastaada hal mar maalintii - si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah jidh-dhisayaasha ayaa u eg sida loo kala-gooyo qiyaasta laba saacadood oo 12 kaas oo sidoo kale wanaagsan in la ilaaliyo heerarka dhiigga ee ugu wanaagsan.
Isticmaal steroid ah waxaa loo isticmaali karaa dufan kale sida Dbol, N2Guard, iyo Cardarine si natiijo wanaagsan loo yareeyo oo loo yareeyo dhibaatooyinka soo raaca.
Week Tart Dbol N2Guard Kaararin
* ED waxay u taagan tahay maalin kasta.
Waa maxay cidda loo yaqaan 'testosterone testerone'?
Hadda waxaad leedahay aragti ku saabsan qiimeeyayaasha ugu fiican ee laga heli karo suuqa, hadda dhibaatada hadda waxay timaadaa go'aaminta midka saxda ah ee adiga kugu habboon. Dadku waxay leeyihiin falcelin kala duwan ee daroogooyinka kala duwan, waxa laga yaabo inay u shaqeeyaan saaxiibkaa maaha mid kugu filan. Dadku waxay leeyihiin qaababka jirka ee kala duwan, dhakhtarkuna wuxuu marwalba baarayaa xaaladaada kahor intaadan dooran daawada saxda ah.
Dhibaatada testosterone ee hooseeya waxay u baahan tahay daaweyn shakhsi ahaaneed si loo helo natiijooyinka la rabay. Tusaale ahaan, haddii aad u tagto fikradda dadka, qaar ayaa kuu sheegi doona in acetate uu yahay kan ugu fiican, kuwa kale ayaa kuu gudbin doona inaad iibsato cypionate ama xitaa daacadnimo. Habka ugu wanaagsan ee lagu dooran karo qiyaasaha qiyaasaha testosterone saxda ah waa inaad aragto dhakhtar oo aad u sharaxdo dhibaatada markaa isaga / iyada ayaa qori doona daawada saxda ah.
Maxay yihiin talooyinka lagu dooranayo qiimaha saxda ah ee saxda ah?
Riyada qof kasta oo jirka ka mid ah waa inuu lahaadaa muuqaal jidheed oo muuqaal ah, jirdhiska jirka, iyo murqaha cirridka leh. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood sida wax soo saarka testosterone ee jirka ku jira ayaa diidi kara fursadda inaad ku guuleysato xirfaddaada.
Badanaa xubnaha jidhka waxay isticmaalaan qiimeeyayaasha testosterone si ay u gaaraan murqaha ay u baahan yihiin ka dib qaab jimicsi adag. Caadi ahaan, jirkaagu ma hayo testosterone ku filan si loo dhiso murqahaaga wuxuuna ku siinayaa tamarta aad u baahan tahay sida jirka jirka. Macnaha waxaad u baahan tahay inaad kor u qaado qiimeeyayaasha habboon.
Haddaba sidee ayaad u dooranaysaa qiimaha saxda ah ee testosterone?
Waqtigan xaadirka ah, suuqa wuxuu ka buuxsamaa qiimeeyayaasha kala duwan oo laga yaabo inay ku adkeeyaan inaad doorato midka ugu wanaagsan. Dhammaantood waxay sheeganayaan inay yihiin kuwa ugu fiican iyo inay xal u helaan dhibaatadaada. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad taxadar badan sameyso inta aad caawimaad ka raadsatid xirfadle caafimaad. Tixgeli talooyinka soo socda markaad dooraneyso dhiirigeliyaha testosterone saxda ah;
1. Fahmaan waxa aad u baahan tahay
Ka hor inta aadan booqan dhakhtarkaaga wixii talo bixin ah, marka hore faham dhibaatadaada. Tusaale ahaan, haddii dhibaatadaadu aysan awoodin inaad ku guuleysato muruqyada caatada ah ee lagama maarmaanka ah ama xitaa haddii aad rabto inaad gubto dufankaaga jirkaaga oo dhakhtarkaaga shaqo ka dhigaya si sahlan oo loo ogaado daawada ugu fiican. Qalabka testosterone waxay leeyihiin waxyaabo kala duwan oo lagu xalliyo dhibaatada gaarka ah. Qaar kale waxay u fiican yihiin dadka daaweynaya cudurrada kala duwan iyada oo kuwa kalena aan loo isticmaalin daawooyinka kale. Ha samayn qalad ah inaad ka iibsato dawooyinka kaaga dukaanka kuugu dhow iyada oo aan hagaagin xirfadle caafimaad. Waxaad halis u noqon doontaa noloshaada sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad la kulanto saameyn ku yeelata caafimaadkaaga.
2. Nooca imtixaanka qaliinka
The testosterone dhiirrigeliyeyaasha waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan qaar waa kuwo dabiici ah halka kuwa kale ay yihiin daawooyinka dhakhtarku qoro. Takhtarkaagu wuxuu ku jiri doonaa meel wanaagsan si uu u ogaado nooca ugu fiican ee aad adiga ka dib baadhayso xaaladdaada caafimaad. Xoogga jirka jidhku waa muhiim markaad qaadato daawadan; jirkaaga waxaa laga yaabaa inaanad si fiican u shaqeynin waxoogaa dheeri ah. Mar labaad waxay kuxirantahay baahidaada testosterone, dhakhtarka ayaa ogaan doona nooca saxda ah ee kaa caawinaya inaad gaarto hadafyadaada.
3. Tayada iyo waxtarka
Qalitaanka testosterone wuxuu u shaqeeyaa si isku mid ah, laakiin farqiga u dhaxeeya waxtarkooda. Noocyada kala duwan waxay leeyihiin nolol kala duwan, daroogooyinka qaarkood ayaa loo baahan yahay in la qaado hal mar toddobaadkii kale dadka kale maalmo 2 ama 3. Baahiyahaaga ayaa hadda ku hagaya dhaqtarkaaga adiga oo dooranaya daawada aadka u fiican. Haddii aadan ku qanacsaneyn daawooyinka loo yaqaan 'testosterone testosterone', waxaad u sheegi kartaa dhakhtarkaaga inuu raadsanayo daawo afka ah.
Qodobka ugu muhiimsan marka aad dooranaysid ama aad isticmaalayso boosteejiyeyaasha testosterone waa inaad ku lug yeelato dhakhtarkaaga tallaabo kasta. Daweynta saameynta daawadu waxay noqon kartaa mid qaali ah oo marmarka qaarna lagama yaabo inaad dib u dhigto xaaladda. Marnaba ha hormarin qiimaha markaad dooranaysid qiyaasaha qiyaasaha testosterone saxda ah maadaama ay suurtogal tahay in la helo alaabo tayadoodu hooseeyso haddii aad tagto alaabta ugu raqiisan. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale ha ku jebin bangigaaga daroogooyinka, tixgeli waxtarka iyo tayada natiijooyinka aad filayso.
Dudley, RE, & Constantinides, PP (2018). S. Arjiga Patent Application No. 15 / 723,985.
Guercia, C., Cianciullo, P., & Porte, C. (2017). Falanqaynta qiyaasaha dufan ee testosterone dufanka qanjaha dheefshiidka ee muusikada by chromatography dareeraha-sarreysa xajinta qulqulka badan. Steroids, 123, 67-72.
Chen, FJ, Patel, MV, Fikstad, DT, Zhang, H., iyo Gillyar, C. (2018). S. Arjiga Patent Application No. 15 / 714,541.
Waxyaabaha 10 waxaad u baahantahay inaad ogaatid kahor intaadan qaadan DMAA Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Duufarka Macdanta